Imivuzo yethu yehlisa amanani okuthengisa, ithimba lemali elinamandla, i-QC ekhethekile, amafektri aqinile, izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme zeMikhiqizo,,,, "Passion, Thembeka, Insiza yomsindo, ukubambisana kukaKeen nentuthuko" izinhloso zethu. Silapha silindele abangani emhlabeni wonke! Besilokhu nomkhiqizi abanolwazi. Ukunambitha iningi lezitifiketi zakho ezibalulekile zemakethe yalo yemikhiqizo, Siyakwamukela ukuthi uvakashele inkampani yethu nefektri futhi igumbi lethu lombukiso likhombisa imikhiqizo nezisombululo ezahlukahlukene ezizofinyelela okulindelwe. Okwamanje, kulula ukuvakashela iwebhusayithi yethu. Abasebenzi bethu bokuthengisa bazozama ngakho konke okusemandleni ukukunikeza ngezinsizakalo ezihamba phambili. Uma uzodinga imininingwane engaphezulu, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi nge-imeyili, ifeksi noma ucingo.
Π Uchungechunge Iwayini Ibhodlela Cat Toy
Π Uchungechunge lweKati Teaser Stick Toy
Incwadi Yesitayela Inja Yendlu i-AT2001 isebenzisa ukwakheka kwesakhiwo okugoqekayo, kungavuleka ngokushesha ukwakha indlu yokwakhiwa kwetende lenja. Akuvumelekile kuphela ukugcinwa ekhaya kepha futhi kulula ukufeza. Idizayini enhle kakhulu yokwakhiwa, ingasetshenziswa ngemizuzwana emithathu ukwakha isikhala sangasese sezilwane ezifuywayo. Phakamisa isisekelo ukuvimbela izilwane ezifuywayo ekuthintaneni nomswakama emhlabathini, ubufakazi bomswakama nobufakazi bomswakama. Ngemuva kokugoqwa, isencwadini, enesibambo esiphathekayo, okulula ukuyihambisa.
Isitayela seSuitcase Cat Cat yangasese kusetshenziswa isakhiwo esigoqekayo, ibhokisi lodoti elifakwe ngokuphelele lingasongwa libe ipotimende, elilungele ukugcina ekhaya noma ukulenza. IKhabinethi isebenzisa idizayini futhi ifakelwe ifosholo kadoti wekati enobubanzi obufanayo, okwenza kube lula ukuthatha indle yekati futhi kuhlanzwe udoti wekati. Lapho isongwe yaba ipotimende, umzimba webhokisi unesibambo esiphathekayo sokuthwala okungcono. Ngemuva kokuvulwa komkhiqizo, inesikhala esikhulu esingahlalisa amakati angafika kuma-10 kilograms, futhi ngezansi kwebhokisi lodoti nalo lenzelwe ukwelashwa okungahambi kahle. Isakhiwo sebhokisi jikelele sakhiwe kahle, esingaqaphela ukuguquka kokunye kusuka ebhokisini lodoti kuya epotimendeni ngemizuzwana emi-3.
Amatebhe Inqola Pet Bag
IMultifunctional Trolley Pet Bag isebenzisa isistimu yomoya ohlanzekile ukuhambisa umoya esikhwameni sesilwane, nangama-ion amabi ukususa iphunga, ukuhlinzeka izilwane ezifuywayo nabanikazi bezilwane ngolwazi olungcono lokuhamba. Imichilo yamahlombe ingu-50 mm ububanzi, okwenza amahlombe alayishwe ngokulinganayo futhi kube lula ukuwaphatha. Isicabha sesikhwama sisebenzisa ukhiye wesango lokuphepha ongasheleli, ongakhiya umnyango ngokhiye owodwa ukuvimbela izilwane ezifuywayo ukuthi ziphume ngengozi. Ngezansi kwesikhwama kuklanywe ngokukhethekile ngamakholomu ukuqinisekisa ukuthi isikhwama sizinzile futhi siyamelana nokujika lapho sibekwa endaweni eyisicaba. Ekuklanyeni kwamasondo, sisebenzisa amasondo e-PU, anganciphisa ngempumelelo ukushaqeka ukunciphisa ukungakhululeki kwesilwane ngesikhathi senqubo yokudonsa, kepha futhi kungamelana nokungqubuzana futhi kuthuthukise impilo yenkonzo.
I-PD525 Training Dog Collar ene-Remote ifaka ithoshi elakhelwe ngaphakathi, imisebenzi emithathu yokuqeqesha kanye namandla wokuxhuma amakhola amathathu ukuya kurimothi. Kungasiza ukubhekana nokuziphatha okuthile okungafuneki kwezinja, njenge
l Ukudonsa phambili
l Ifenisha ehlafunwayo
l Ukuluma / ukunqamula
l Ukujaha abantu ocingweni
l Kubonisa ulaka
I-PD525 Training Dog Collar ene Remote isebenzisa imisebenzi emithathu yomsindo, ukudlidliza nokushaqeka okungaguquguquki ukukhumbuza noma ukuxwayisa izinja ukuthi ziyeke ukuziphatha okubi. Phakathi kwemisebenzi, ukudlidliza nokwethuka okumile kunamagiya ayi-100 okulungiswa, okungasiza kangcono ukulawula ukusebenza kwenja.
I-PD525 Training Dog Collar ene-Remote isebenzisa i-collar strap strap eyenziwe ngezinto ze-TPU, elungele izinja ezinobukhulu obuhlukahlukene. Ingafinyelela ezinsukwini ezingama-60 zokusetshenziswa nangaphezulu kwezinsuku ezingama-200 zesikhathi sokulinda eside ngaphansi kwamandla agcwele. Ibanga elide kakhulu lesilawuli kude lingafinyelela kumayadi angu-1090, futhi lingasetshenziswa ngaphandle.
I-PD520S Training Dog Collar ene Remote ingasetshenziswa ukususa isimilo esingafuneki sezinja njengokukhonkotha, ukweqa, ukudonsa phambili, ukumba nokuningi! Izinketho ezimbili ze-collocation: ukuqeqeshwa okukhethekile komuntu ngamunye ngekhola eyodwa nesilawuli kude esisodwa; amandla wokuxhuma amakhola amabili kurimothi ukulawula ukusebenza kwezinja ezimbili.
I-PD520S Training Dog Collar ene Remote inezindlela ezintathu zokuqeqesha: ukushaqeka okungaguquguquki, ukudlidliza nomsindo. Umsebenzi ngamunye kule mithathu ulawulwa yinkinobho ehlukile, futhi kunezikhundla eziyi-100 ezinamandla nezibuthakathaka zokulungiswa kumodi yokudlidliza nemodi yokushaqeka eyi-static. Ngemuva kokushaja amahora amabili, irimothi ingasetshenziswa kuze kube yizinsuku eziyi-180, isamukeli singasetshenziswa kuze kube yizinsuku ezingama-60, isikhathi sokubekwa sisonke singaphezu kwezinsuku ezingama-200, futhi ibanga lesilawuli kude alidluli kumayadi angama-545. I-Collar strap iyashintshwa, ilungele izinja ezincane neziphakathi nendawo.
I-PD259B Anti Bark Dog Collar
I-PD259B isebenzisa izindlela ezimbili zokuqeqesha, imodi yokushaqeka kagesi kanye nemodi yokushaqeka engagesi. Kumodi yokushaqeka kagesi, i-PD259B isebenzisa isikhumbuzi somsindo, isikhumbuzi sokudlidliza kanye nesixwayiso sokushaqeka kagesi, ngenkathi imodi engeyona eye-static isebenzisa isikhumbuzi sokudlidlizela okulekelelwa isikhumbuzi somsindo, esingasethelwa izimo zezinja ezahlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, i-PD259B Anti Bark Dog Collar ifakwe isikrini sokubonisa ukufeza ukubonwa kokusebenza nokwenza ukusetshenziswa kwe-PD259B kube lula kakhulu. Izinga lokuzwela nalo lingalungiswa ngokuya komsindo wenja wokukhonkotha. Isimo sokuzwela sinquma ukuthi kulula kanjani ukuqala i-PD259B Anti Bark Dog Collar ukuthi isebenze.